ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत हवाई भाडा छूट – Janapriyakhabar
मुख्य पृष्ठ / फोटो फिचर / मुख्य खबर / राष्ट्रिय / समाचार
ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत हवाई भाडा छूट
९ भाद्र २०७६, सोमबार प्रकाशित
९ भदौ, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आफ्नो १४१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरे । यसमध्ये आन्तरिक उडानमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत हवाई भाडा छूट दिने घोषणाले तत्काल चर्चा पाएको छ । सरोकारवालासँग छलफल गरी तीन महिनाभित्र यो घोषणा कार्यान्वयन गराउने मन्त्री भट्टराईले बताएका छन् । ‘यसको कार्यान्वयनमा वायुसेवा कम्पनीको समेत भूमिका हुने भएकाले सरोकारवालासँग छलफल आवश्यक छ,’ उनले भने ।
अन्तर प्रदेश उडान बिस्तार
विमानस्थल आयोजना के हुन्छ ?
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बताएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडी बढाउन लगानी बोर्डसँग छलफल गरी लगानीको मोडालिटी बनाउने घोषणा मन्त्री भट्टराईले गरेका छन् । टाँगिया बस्ती व्यवस्थापनको मोडालिटी स्पष्ट बनाउने तथा वृक्षारोपणका लागि क्षेत्र पहिचानको योजनासमेत सरकारले समेटेको छ । ९ महिनाभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगको समन्वयमा साइट क्लियरेन्स गर्ने योजना सरकारको छ । पोखरा विमानस्थल विमानस्थल निर्धारित समयभन्दा अगाडी नै सम्पन्न गर्ने र गौतमबुद्ध विमानस्थलको निर्माण डिसेम्बर २०१९ भित्रैे सम्पन्न गर्ने योजना रहेको मन्त्री भट्टराईको योजनामा उल्लेख रहेको छ ।
नेपाल एयरलाइन्स व्यवस्थापनमा के हुन्छ ?
नेपाल एयरलाइन्सको समग्र व्यवस्थापन सुधारलाई तिब्रता दिने बताएको मन्त्रालयले निगमको सुधारका लागि के गर्ने भन्ने चाहीँ खुलाएको छैन । यसैवर्ष निगमको उडान चीनको ग्वाङझाउ र साउदी अरेवियाको रियादमा गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । निगमका सबै जहाज संचालनमा ल्याउने, कार्यक्षेत्र बढाउने, सबै प्रकारका टिकट अनलाइनबाटै बिक्रि गर्न सक्ने बनाउने योजना समेत समेटिएको छ । निगमलाई ५ वटा नयाँ सटल बस खरीद गरी विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डिलिङ सेवालाई स्तरीय बनाउने योजना रहेको छ । उडान रद्द वा ढिलाइ हुने भए कम्तीमा २ घण्टा अगाडी नै यात्रुलाई त्यसको जानकारी गराउने योजना समेटिएको छ ।